KA BOGO: Rikoodhadii laga diiwaan galiyay kulankii uu xulka Belgium xaaqay Hungary, uguna soo baxay wareegga siddeed dhammaadka EURO 2016 – Gool FM
KA BOGO: Rikoodhadii laga diiwaan galiyay kulankii uu xulka Belgium xaaqay Hungary, uguna soo baxay wareegga siddeed dhammaadka EURO 2016
(France) 27 Juunyo 2016 – Xulka qaranka Belgium ayaa si raaxo leh ugu soo gudbay siddeed dhammaadka koobka qaramada Yurub ee Euro 2016 kaddib markii ay 4-0 uga taqaluseen xulka Hungary.
Haddaba waxaan halkan kugu heynaa aqriste RIKOODHADII laga diiwaan galiyay kulankan:-
>- Kulankan xulka Belgium 4-0 uga adkaaday Hungary waa guushiisii ugu waynayd abid ee ay gaaraan tartan weyn.
>- Eden Hazard ayaa saddex caawin u sameeyey xulkiisa Belgium tartankan Euro 2016, waana inta uu u sameeyey kooxda Chelsea horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii dhammaad oo dhan 2015/16 oo ah 3 caawin.
>- 6 ka mid ah 7 gool oo uu xulka Belgium ka dhaliyey Euro 2016 ayaa waxaa caawiyey oo kala qeybsaday Kevin De Bruyne (3) iyo Eden Hazard (3).
>- Goolkii labaad ee xulka Belgium iyo kii saddexaad ee kulankan ay ka adkaadeen Hungary ayaa waxaa u dhexeeyey kaliya 94 il biriqsi.
>- Kevin De Bruyne ayaa ku lug lahaa 33 ka mid ah 100 gool oo uu xulka qaranka Belgium dhaliyey, isagoo ka hoos ciyaaraya macallin Marc Wilmots (13 gool oo uu dhaliyey 20 waa uu caawiyey).
>- Kevin De Bruyne ayaa dhaliyey ama caawiyey 11 gool 12-kii kulan ee ugu dambeeyey oo uu u ciyaaray xulka Belgium (5 gool waa uu dhaliyey, 6 waa caawiyey).
>- Afar ka mid ah shan gool oo uu xulka Belgium ka dhaliyey Euro 2016 ayaa waxaa gacan ka geystay Kevin De Bruyne (2) iyo Eden Hazard (2).
>- Goolhaye Gabor Kiraly ayaa kulankan ay ka horjeedeen Belgium sameeyey gool badbaadin badan oo ah 7 waana in ka badan inta badbaadin ee laga sameeyey hal kulan tartanka Euro 2016.
>- Toby Alderweireld ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee xulka Belgium tan iyo bishii November sanadkii 2013, markaasoo uu ka dhaliyey xulka Japan, waxaana sidoo kale ka caawiyey goolkaas De Bruyne.
>- Waa markii ugu horreysay oo xulka Belgium dhaliyo shan gool hal tartanka oo EURO ah.
>-Xulka Belgium ayaa dhaliyay gool qeybta hore ee ciyaarta koobka qaramada Yurub, waana markii ugu horreysay tan iyo Euro 2000.
EURO 2016: Yuu xulka Belgium ku beegmayaa wareegga siddeed dhammaadka, yaase loo doortay Man Of The Match?
HOR DHAC: England Vs. Iceland